सजिलै जागिर | Rastra News
के तपाईं जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ ? कि जागिर नपाएर भौतारिरहनु भएको छ ? यदी जागिर नपाएर भौतारिरहनु भएको छ वा तपाईं जागिरको खोजिमा हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता नलिनुस् । तपाईंलाई पोखराको हाम्रो जब नेपाल डटकमले रोजगार खोज्न सघाउने भएको छ । त्यो पनि निःशुल्क रुपमा ।
पोखराको बुद्धचोकमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस संस्थाले नेपालका जुनसुकै ठाउँमा जागिर खोजि दिने हाम्रो जब नेपाल डटकमका प्रोपाइटर पूर्ण श्रेष्ठले जानकारी दिए । सन्ध्या कन्सल्टेन्सीका नाममा २०७० सालबाट सञ्चालित यस संस्थाले डिजिटलाइजेसन गर्दै वेबसाइटमार्फत सेवा दिन थालेको हो । यसअघी भने सन्ध्या कन्सल्टेन्सीमार्फत पोखरालाई कार्यथलो बनाएर काम गर्दै आएको थियो ।
जागिर दिने हाम्रो जबनेपाल डटकमका प्रोपाइटर श्रेष्ठ स्वयम् विदेशबाट फर्केका युवा हुन् । स्वदेशमा शिक्षा दीक्षा लिएर पनि रोजगार नपाउँदा विदेश पुगेकाले त्यहाँ पाएको दुःख र श्रम शोषण देखेर आफूले नेपालमै रोजगार दिलाउने उद्धेश्यले संस्था खोलेको उनले बताए ।
विहीबारदेखी देश तथा विदेश जुनसुकै ठाउँबाट जागिरका लागि फारम भर्न सकिने ब्यबस्था गरिएको प्रोपाइटर श्रेष्ठले बताए । जागिर दिने र खोज्ने दुबै पक्षलाई समेटेर संस्थाको सेवा बिस्तार गरेको उनको भनाई छ ।
यसका लागि शुरुमा जागिर खोज्ने वा जागिर दिने दुबैले संस्थाको www.hamrojobnepal.com लग इन गरेर त्यहाँ भएको फारममा विवरण भर्न सकिन्छ भने [email protected] मा मेल गरेर पनि फर्म भर्न सकिन्छ । फर्म निःशुल्क भर्न सकिने संस्थाले जनाएको छ ।
Previous articleउम्मेदवार भोट माग्न ब्यस्त
Next articleहालीमुहाली गर्न गठबन्धन ः गुरुङ
२ वर्षमा नेपालका कम्युनिस्ट असफल ः पौडेल
काँग्रेस निर्वाचित वडाध्यक्ष भन्छन् – ‘सरकार र पोखरा महानगरपालिकाको विशेष चासो...
यस्तो बेला कर तिर भन्नु सरकारको गैरजिम्मेवारी – कास्की काँग्रेस